Miyayse ku shubtaa ee aan la rabin in la dilo? | Apg29
Miyaan lagu ciqaabo dhimasho sida aan loo baahnayn?
Haddaba waxaan ku qori buug aan labaad loo yaqaan "The rabin". Waxay ku saabsan tahay carruurnimadii, sida aan Ayadoo dunida this yimid.
Waxaa la ii sheegay in aan badan ama ka yar kufsi ah. Waxaan idinku leeyahay in aan kitaabkayga ka soo socota, la rabin. Shallaytadaydee aan sida aan la rabin in la ciqaabo leh dhimasho by ilmo iska soo ridid?
Haddii aan ka heli jiran jir ama, waa in aan la ciqaabin geerida sida la rabin by "UCID"?
Waxaan aragnaa in labada carruurta aan dhalan, kuwa buka iyo waayeelka khatar ah ku nool yihiin. Waxay had iyo jeer la dilay karo waayo, ma ay jecel yahay ama qiimo leh oo ku filan. Waxaa laga yaabaa in ay heshay fikradda this ama qof kale waxa uu sheegay in.
asxaabta qaar ka mid ah Mudaharaad ka dhanka ah ilmo iska soo ridid, ka dibna qof oo ku yidhaahdeen: "aad Taasi ma ay ceeboobi doonaan!" Waa in la xishoodeen in nolosha ay xumme tahay? Sidee gurracan ma uu ahaa? Kii u noqon lahaa ka xishoon ahaa mid ku yidhi.
Gabadhayda 13 sano jir ah oo mararka qaarkood uu walaac qoto dheer. Waxay tidhi: "Markii aan ku dhashay, waxaan ahaa sagaal bilood jir ah, laakiin sida ay tahay in ay qaaday sanad ka hor inta aan u dabaal aan sanad jirsan Waxa kaliya sugayay lahaa saddex bilood?!"
9 bilood + 3 = 1?
Waxaad ahaayeen sagaal bilood ka hor aad dhalatay. In sagaal bilood, waxaa jiray nolol aadanaha ee caloosha hooyadaa in aad ahayd. Lahaa nolosha noocan oo kale ah la isku daygii iyo dilay?
Anigu ma waxay lahayd fudud ee nolosha, laakiin waxaan ahay waan ku faraxsanahay wayn uu ku dhashay! Iyo ugu wanaagsan oo dhan, waxaan helay fursad ay ku da'da 20 helaan Ciise Masiix! Markaasaa mar labaad aan ku dhashay iyo noloshayda ahaa loo bedelay!
Waxaa macquul ah in aan la rabin by dadka, laakiin waxaan jeclaaday by Ilaah!
Markii gabadhayda la dhashay, iyana doonayay oo. Waa Faransiis ee la doonayo. Waxay ahayd mid labada doonayo by my iyo iga xaaskiisa - oo la doonayo by Ilaah!
V 03, måndag 18 januari 2021 kl 07:27